Ibuyisela emphakathini eyamathekisi | News24
Ibuyisela emphakathini eyamathekisi
SEBEYINGXENYE yokunakekela abantwana abampofu kanye nabagibeli abanye babangcwabi bakuleli dolobha emkhankasweni owaziwa ngeSantaco (South African National Taxi Council)-KZN Schools Outreach owasungulwa yile nhlangano yamathekisi aseMgungundlovu.
Lo mkhankaso wokubhekelela abantwana ezikoleni kusona sonke isifundwazwe saseKZN waqalwa yibo bonke ososeshini abangaphansi kweSantaco eMgungundlovu ngenhloso yokubhekelela abantwana abaswele ngomfaniswano ezikoleni. Umcimbi wokunikezela ngomfaniswano ububanjelwe eCity Hall ngoLwesine olwedlule. Kumanje nje Santaco-KZN isikwazi ukuthi inikele ngomfaniswano ezikoleni ezahlukahlukene esifundwazweni sisonke.
“Sibheke ukuthi ngonyaka ozayo sibhekelele abantwana abayinkulungwane (1000). Kulo nyaka sikwazile ukuthi sibhekelele abantwana abawu 760 kanti uma siqhubeka sisebenza ngokubambisana nabaxhasi bethu bonke lokhu sizophumelela. Lena yindlela yethu esibuyisela ngayo emphakathini ngokusisiza futhi useseke ngokusebenzisa izimoto zethu. Imfundo ibaluleke kakhulu esizweni sethu futhi yingakho sibone kukuhle ukuthi sixhase abantwana okuyibona bantu abayisizwe sakusasa,” kusho uSokhela.
Imeya yedolobha uMnu Chris Ndlela, naye obeyingxenye yezicukuthwane ebezikulo mcimbi, uthe: “Lokhu onikwenzayo (imboni yamatekisi) kuyancomeka kakhulu. Akukuncane neze kodwa kukhulu ngoba kubhekelelwa abantwana abavela emakhaya ahlukene. Njengoba ngimi lana phambi kwenu ngikhulumela abazali, othisha kanye namalunga omphakathi azwakalisa ukubonga,” kubeka uNdlela.
Lo mnikelo ukhule kakhulu njengoba phakathi kwabantwana abazomukela umfaniswano sekukhona nezinye izinhlanga okungabomdabu waseNdiya kanye nabantwana bebala elimhlophe.Ezinye zezikole ezinabafundi abaxubile ngokwebala izikole zamabanga aphansi i-Allandale, Ramathar, Berg Street ne-Orient Heights nezinye.
Abafundi bebephelezelwa othisha babo ukuzokwamukela umfaniswano kulo mcimbi